Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) - Hello Sayarwon
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း)
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ကဘာလဲ။
Gynaecomastia ဆိုတာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ရင်သားကြီးထွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ estrogen နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်ရာကနေ ရင်သား တစ်ရှူးတွေကြီးထွားမှုတွေ ဖြစ်တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းဟာရောဂါမဟုတ်ပါဘူး၊ အပြင်ပန်းလှပမှုဆိုင်ရာ ပြသနာတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီကျန်းမာရေး အခြေအနေဟာ လူ့အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့မှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အသက် ၁၂ မှ ၁၆ နှစ်ကြား ကောင်လေးများ
ကလေးငယ် ယောင်္ကျားလေးများတွင် ပျိုဖော်ဝင်ပြီး ၆ ပတ်ကနေ ၃ နှစ်အထိ ရင်သားက ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Gynecomastia ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အမျိုးသားများတွင် ရင်သားများ ပုံမှန်ထက် ကြီးထွားနေခြင်း
နို့သီးခေါင်းအောက်ဘက် လက်ဖြင့်စမ်းကြည့်လျှင်သိနိုင်တဲ့ မာပြီးရောင်နေသော တစ်ရှူးရှိခြင်း
ရင်သား အနည်းငယ် ကိုက်ခဲခြင်း
ရင်သားတစ်ဖက် သို့ နှစ်ဖက်လုံးတွင် နာခြင်း;
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ gynaecomastia ဟာ လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲရာက အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ မွေးကင်းစ ကလေးငယ် ယောင်္ကျားကလေးများတွင်သာမက အဖိုးအိုတွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တချို့သော ကုသမှုတွေ၊ဆေးဝါးတွေ နှင့် ကာယဗလအတွက် ကြွက်သားကြီးဆေး အချို့ကြောင့်လဲ gynecomastia ဖြစ်စေပါတယ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် soya မှာ estrogen ဟော်မုန်းအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရင်သားကင်ဆာ၊ နို့အုံအကျိတ်၊ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်၊ အသည်း သို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ကဲ့သို့ကြောင့်လည်း ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
gynaecomastia ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက် – ပျိုဖော်ဝင်စ ယောင်္ကျားလေးများ သို့ အဖိုးအိုများတွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အားကစားလုပ်ရမှာ anabolic steroids သို့ androgen ဟော်မုန်းတွေသုံးခြင်း
အသည်း သို့ ကျောက်ကပ်၊ thyroid ရောဂါ၊ ဟော်မုန်းရောဂါ နှင့် Klinefelter syndrome တို့ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်တွေက ရင်ဘတ်နှင့် ရင်သားကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာလို့ရပါတယ်။ ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့် တခြားအရာတွေရျာနိုင်ဖို့ သွေးစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ဆရာဝန်တွေက mammography နှင့် ရင်သားကို ultrasound ရိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အကျိတ်ရှိမရှိ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၆နှစ် ကောင်လေးတွေနဲံ ကလေးငယ်တွေမှာ အသက်ကြီးလာလျှင် သူ့ဘာသာ ပျောက်သွားနိုင်တာကြောင့် ကုသမှု မလိုအပ်ပါ။ တခြားကူသမှုတွေကတော့
ရင်သားရောင်နေရင်ရေခဲကပ်ခြင်း နှင့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သုံးလို့ရပါတယ်။
အားကစားလုပ်ရာမှာ ဆေးတွေ မသုံးပါနဲ့။ သုံးနေလျှင်လဲ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဟော်မုန်းရောဂါတွေ အတွက်ကတော့ ဟော်မုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့ ရင်သားတစ်ရှူးတွေကို ပုံမှန်ဖြစ်စေအောင် ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်။ မသက်သာခဲ့လျှင် ဆရာဝန်တွေက တစ်ရှူးအပိုတွေဖြတ်ဖို့ ညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Gynecomastia (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရင်သားကြီးထွားခြင်း) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Gynecomastia ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• သင်နေ့စဉ် အစားအစာထဲမှာ soya ကထုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ မပါပါစေနဲ့
• ဟော်မုန်း estrogen လို ဆေးတွေမသုံးပါနဲ့
• ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးသောက်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ ဆေးသောက်တာ သို့ ဆေးရပ်လိုက်တာ တို့ မလုပ်ပါနဲ့
သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် လက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်မှုရှိအောင် ရက်ချိန်းမှန်မှန် သွားရောက်စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012.
Gynecomastia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gynecomastia/basics/definition/con-20028710. Accessed Jul 14 2016
Gynecomastia. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003165.htm. A
ccessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012.